ရှေးကောကျခံမဟုတျတဲ့ တပျမတျောသားကိုယျစားလှယျတှကေိစ်စ ဒေါကျတာသကျသကျခိုငျ ဘာပွောလဲ ? – Voice of Myanmar
ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ(PPP) ရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာသကျသကျခိုငျအနနေဲ့ NLD ပါတီကနေ ဒဂုံမွို့နယျက ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ တာဝနျယူရတဲ့ ကာလတှအေတှငျး ပွညျသူတှအေတှကျ ဘာလုပျခဲ့သလဲ? လကျရှိလှတျတျောတှထေဲရောကျနတေဲ့ ပွညျသူရှေးကောကျခံမဟုတျတဲ့ တပျမတျောသား ကိုယျစားလှယျ ၂၅ % ကိစ်စမှာ ဒေါကျတာသကျသကျခိုငျရဲ့ သဘောထားဘယျလိုရှိသလဲ ဆိုတာ Voice Of Myanmar(VOM) ရဲ့ အယျဒီတာခြုပျ ကိုနလေငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတဲ့ ရုပျသံကို ကွညျ့ရှုနိုငျပါပွီ။
နိုဝငျဘာ ၈ ရကျမှာ ကငျြးပမယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဒေါကျတာသကျသကျခိုငျဟာ မရမျးကုနျမွို့နယျကနေ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးအနနေဲ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #PPP #ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျ #ဒေါကျတာသကျသကျခိုငျ
ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကိစ္စ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် ဘာပြောလဲ ?
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်အနေနဲ့ NLD ပါတီကနေ ဒဂုံမြို့နယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တာဝန်ယူရတဲ့ ကာလတွေအတွင်း ပြည်သူတွေအတွက် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ? လက်ရှိလွှတ်တော်တွေထဲရောက်နေတဲ့ ပြည်သူရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ % ကိစ္စမှာ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ရဲ့ သဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာ Voice Of Myanmar(VOM) ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုနေလင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်သံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ဟာ မရမ်းကုန်မြို့နယ်ကနေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #PPP #ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင် #ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်
Election, Interview, ကိုယျစားလှယျလောငျးမိတျဆကျ, ဓာတျပုံ ဗီဒီယို, သုံးသပျခကျြ, အငျတာဗြူး